छविसँग २ वर्षअघि नै बिहे भएकाे हाे त? शिल्पाले गरिन् खुलासा [भिडियो अन्तर्वार्ता]
असार २२, २०७५| प्रकाशित १७:५६
काठमाडौं– नारीप्रधान फिल्म ‘वीरांगना’ आगामी असार २९ गतेबाट देशभर प्रदर्शनमा आँउदै छ। राजबहादुर सानेको निर्देशन रहेको फिल्ममा अनुप विक्रम शाही, शिल्पा पोखरेल, पृथ्वीराज प्रशार्इं लगायतको अभिनय रहेको छ।
नेपाली समाजभित्र रहेको पुरुषप्रधान प्रवृतिमा नारीपात्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सशस्त्र प्रहरी बल (एपिएफ)को जवानको कथामा एक्सन प्रधान फिल्म बनाएको फिल्मका निर्देशक सानेको दावी छ। यता दर्शकको अपेक्षा र मागअनुरुप फिल्म ‘वीरंगना’मा आफूले अभिनय गरेको शिल्पा बताउँछिन्। पछिल्लो पटक फिल्म ‘मंगलम’मा भावुक र रोनाधोनायुक्त अभिनयमा देखिएकी शिल्पा ‘वीरांगना’मा कस्तो भूमिकामा देखिने छिन् त? यो प्रायः दर्शकहरुको कौतुहलताको विषय बनेको छ।
उता बिहीबार मात्रै अभिनेत्री रेखा थापाले रमाइलाे छ डट कमकाे स्मारिकामा निर्माता/निर्देशक छविराज ओझासँग शिल्पाले २ वर्ष अघि नै बिहे गरेको खुलासा गरेकी थिइन्। के यो सत्य हो त? यसको जवाफ पनि शिल्पाको मुखबाट दर्शकले पर्खिरहेका छन्।
फिल्म ‘किस्मत–२’ बाट नेपाली रजतपटमा पाइला टेकेका अभिनेता पृथ्वीराज प्रशाईंले शिल्पासँग यसै फिल्मबाट तेस्रो पटक स्क्रिन सेयर गर्दैछन्। उनी फिल्मको प्रचार–प्रसारमा व्यस्त हुँदै आएको बताउँदै आएका छन्। तर फिल्मका अर्का प्रमुख अभिनेता अनुपविक्रम शाहीले भने प्रचारका लागि सहयोग नगरेको आरोप छ। यस सम्बन्धमा आखिर वास्तविकता केहो त?
यीनै परिदृष्यमा रहेर नेपाल लाइभको ‘कला संवाद’का लागि मनोज न्यौपानेले ‘वीरांगना’ फिल्म युनिटसँग गरेको भिडियो अन्तवार्ताः